ထိုင်းနိုင်ငံလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
၈ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးကို ACE ဟိုတယ်၊ ပင်းယဆောင်မှာ မေလ ၂ဝ ရက်နေ့က ကျင်းပစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖော် ထုတ်နိုင်ဖို့ လွှတ်တော်ရှိတဲ့အပြင် ဆန္ဒဖော်ထုတ် ခွင့်တွေကို ဥပဒေအတိုင်း ခွင့်ပြုနေတာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အခြေအနေမျိုး မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က ဒီနေ့ ပြောကြားပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေ အစည်းအဝေးအပြီး သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက်တစ်ဦး ရဲ့ မေးခွန်း ကို မြန်မာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီး ဝေလွင်က အခုလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
"လက်ရှိအနေအထားဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးရဲ့ အနေအထားမှာ ဖြစ်မယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို ကျနော်တို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း အရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်း ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်လည်းရှိပါတယ်၊ သို့သော်လည်းပဲ လက်ရှိပြည်သူလိုအပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ လုပ်နေတယ် ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလည်း ပွင့်လင်းစွာဖော်ထုတ်နိုင်တယ်၊ ဒ့ါအပြင် သက်ဆိုင်ရာဆန္ဒပြခွင့်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းစနစ်နဲ့ အညီ ပေးထားတဲ့အတွက် ဒီ့ထက်ကြီးထွားတဲ့ဟာမျိုးတွေ မဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေ ရရှိနေတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်"
ဒီနေ့မနက်စောစောပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က မာရှယ်လော ညမထွက်ရ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီး သတင်းထောက်က မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို မနေ့ကစပြီး နေပြည်တော်မှာ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပနေတာဖြစ် ပါတယ်။
Oh, STOP IT! You don't know today what you are going to eat for lunch tomorrow and you are telling us that what happened in Thailand won't happen in Burma? Whatajoke especially coming fromagang of thugs who have repeatedly broken promises made all through Burmese history! I'm sure Min Aung Hlaing would copycat what Thai Defense Chief said, which was "This isatemporary martial law just to keep the law and order. It's notacoup." If you fool us once, shame on us! If you fool us twice, shame on you and we can't get fooled again.
[ဤမှတ်ချက်အား လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ၏ အသုံးပြုခွင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အယ်ဒီတာက တည်းဖြတ်ထားပါသည်။]
ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ပုဒ်မ(၁၈) ရှိနေတယ်လေ။
May 22, 2014 11:43 AM